စာမူတိုင်းတွင်စကားလုံးမည်မျှမှန်ကန်သနည်း။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 13, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
တစ် ဦး ပေါ်တွင်တင်ခြင်းများအတွက် Indy မြစ်ဆုံမှ Kudos ဒီမှာ Indianapolis ၌ကြီးစွာသောကွန်ယက်ဖြစ်ရပ် မနေ့က။ ကွန်ရက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်မတူဘဲ Brett Healey နှင့် ဦး ဆောင်သော Indy Confluence အဖွဲ့သည် Erik ကုန်းပတ်၎င်းသည်အသင်း ၀ င်များအားလုံးအတွက်ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးမြင့်အကြံဥာဏ်များပေးရန်ဒေသတွင်းရှိရှေးရှေးအုပ်စုတစ်စုကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဒီလခေါင်းစဉ်ကဘာကြောင့် Corporate Blogging ဆိုတာကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတာလဲ၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုအဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
panel ကို Chris Baggott နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်၊ Rhoda Israelovရိုဂျာဂျွန်ဆင် Kyle Lacy ငါနဲ့ငါ
ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောဆွေးနွေးမှုဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာငါ့ craw ၌တည်၏: ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုဘယ်လောက်ရှိသင့်သလဲ။.
စကားစမြည်ပြောဆိုမှုသည်စားပွဲတစ်လျှောက်တွင်ရှိခဲ့ပြီးစကားပြောသူအများစုသည် pithy ရေးသားချက်များကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပြီးစကားလုံး ၂၅၀ ကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည်။ 'ရှည်လျားသောကော်ပီ' ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အား panel ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်၊ ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုစကားလုံး ၂၅၀ တောင်မှတောင်မထူထောင်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်စာဖတ်သူအမြောက်အများရှိပြီး၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုနှင့်စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်တိုးပွားလာသည်။ ငါအရေအတွက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ စာမူတစ်လုံးလျှင်စကားလုံး ပြီးတော့အဲဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်မှာလူကြိုက်များမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဆက်စပ်မှုမရှိခဲ့ဘူး။
ဒီတစ်ခါတော့တခြားဘလော့ဂ်တွေကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မည်သည့်ဘလော့ဂ်များမဆို။ ငါရှာဖွေတဲ့အခါ Google မှာထိပ်တန်း5ရလဒ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် SEO အတွက် blogging။ ငါတိုက်ပွဲ၏ထိပ်ဆုံးအဆုံးမှာမည်သူမဆိုငါ့ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသောသူတို့၏ပို့စ်များကိုအချို့ကိုက်ညီမှုရှိလိမ့်မည်ပုံရသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘလော့ဂ်ငါးခုခဲ့ကြသည် SEOmoz, Google အတွက် SEO, အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်, Hittail ဘလော့ဂ်, ပြီးနောက် နေ့စဉ် SEO ဘလော့ဂ်.
ဤဘလော့ဂ်များသည်အလွန်များပြားသောရှာဖွေမှုရလဒ်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်လူကြိုက်များပြီးသက်ဆိုင်သည်။ ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်ပေါင်း ၅၀ အတွက်ဘလော့တစ်ခု၏နောက်ဆုံး ၁၀ ခုကိုဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ရလဒ်များသည်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းငြင်းခုံခဲ့သည့်အရာများကိုထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်စေသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
SEOmoz တွင်ပျမ်းမျှစာမူတစ်လုံးလျှင်စကားလုံး ၈၃၂.၃ နှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စာမူတစ်လုံးလျှင်စာလုံးရေ ၅၁၂.၅ ရှိသည်။
ဂူဂဲလ်အတွက် SEO တွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စာမူတစ်လုံးလျှင်စာလုံးရေ ၃၁၅ လုံးနှင့် ၃၄၉.၇ စလုံးတွင်စကားလုံးတစ်လုံးစီရှိသည်။
ထိပ်တန်းအဆင့်ဘလော့ဂ်များတွင်ပျမ်းမျှစာမူတစ်လုံးလျှင်စကားလုံး ၇၄၄.၅ လုံးရှိပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့်စာမူ ၇၄၄ လုံးရှိသည်။
Hit Tail ဘလော့တွင်ပျမ်းမျှစာမူတစ်လုံးလျှင်စာလုံးရေ ၂၅၅ လုံးရှိပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့်စာမူတစ်လုံးလျှင်စကားလုံး ၂၃၃ လုံးရှိသည်။
နေ့စဉ် SEO ဘလော့တွင်စာမူတစ်လုံးလျှင်စာလုံးရေ ၄၅၀.၈ လုံးရှိပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့်စာမူတစ်လုံးလျှင်စာလုံးရေ ၅၀၇ လုံးရှိသည်။
နောက်ဆုံးရလဒ်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖြစ်သည် 526 ပို့စ်တစ်ခုလျှင်စကားလုံးများနှင့်ပျမ်းမျှ 447 စာမူတစ်လုံးလျှင်စကားလုံး တိုင်းတာထားသည့်ပို့စ် (၅၀) တွင် (blog တစ်ခုလျှင် ၁၀ ခု) ၆၆ ခုသာစာလုံးရေ ၂၅၀ သာရှိသည်။ အရင်တုန်းကပို့စ်ရဲ့အရွယ်အစားကကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ရဲ့စာဖတ်သူတွေကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုတာသက်သေပြခဲ့တယ်။ ယခုငါထပ်မံပြော ဦး မည်၊ စာမူတစ်ခုအတွက် Words အတွက်ကျွန်ုပ်အကြံပေးသည်မှာ
ပို့စ်တစ်ခုစီအတွက်သင်ရေးသားသောစကားလုံးအရေအတွက်သည်စာမူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်လိုအပ်သောစကားလုံးအရေအတွက်ဖြစ်သင့်သည်။ စာမူတစ်ခုစီ၏စာအရေအတွက်သည်လက်ရှိစာဖတ်သူများမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတစ်သမတ်တည်းဖြစ်သင့်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စကားလုံးအရေအတွက်ကိုရေတွက်။ မရ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုတွေ့ရှိပါကသူတို့ရှာဖွေခဲ့သမျှကိုရရှိရန်သေချာသည်။
13:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 09
ဤအချက်အလက်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်သစ်လွင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအား အလွန်ကြီးမားလာသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများကို လွန်ကဲစွာ ကြောက်လန့်တကြားဖြင့် မလွှမ်းမိုးစေလိုသောကြောင့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ပို့စ်များစွာတွင် ပိုင်းခြားထားသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်သည် အောက်သို့ အလွန်အကျွံ ဆင်းပေးရသော ဆိုဒ်များကို မကြိုက်ပါ။ ဘာပဲပြောပြော ဒီနေရာလေးမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စကားလုံး 2500 ကျော်ယူပေမယ့် ပို့စ်တစ်ခုထဲမှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြီးအောင်လုပ်သင့်တယ်။ ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေး တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
13:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 41
Doug ကဲ့သို့ အကြောင်းအရာသည် ဆီလျော်ပြီး အဖိုးတန်ပါက၊ အရှည်သည် အရေးမကြီးပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဘလော့ဂါတစ်ဦးသည် သူ့ကိုယ်သူပြောသောစကားကိုကြားရုံမျှသာပြောနေလျှင် (ကံမကောင်းသည်မှာ မကြာခဏဖြစ်တတ်သည်) ဆိုလျှင် ၎င်းသည် အခြားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။
13:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 06
ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုတွင် သင့်အမှတ်ကိုရရှိရန် လိုအပ်သလောက် စကားလုံးများစွာရှိသင့်သည်။
ဘာမှပြောစရာမရှိ? အမှတ် = ၀ စကားလုံးမရှိ။
ပြောချင်တာက ဝါကျတစ်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကောင်းတဲ့ စကားပါ။ ရာဇ၀တ်သားအတွက်ကြောင့် သင်သည် ကိုးကားစာအုပ်တစ်အုပ်တွင် အဆုံးသတ်နိုင်သည်။
လေအိတ်ကြီး၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လေအိတ် = ရေးပါ။ ထွက်ပါစေ။ လေဝင်လေထွက်! ဟစ်အော်သံ! အရူး။ ဘယ်​သူ​တွေ စကား​တွေ​ပြော​ပြော ဂရုစိုက်​​နေလဲ???? ခံစားချက်ပိုကောင်းလာရင် လုပ်ပါ။ (ဒါက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေအတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။)
အတွေးများ အားကောင်းနေပါက ပို့စ်အရှည်ကြီးကို လူတွေဖတ်ကြလိမ့်မည်… အရေးအသားညံ့လျှင် စကားလုံးအရေအတွက် သို့မဟုတ် စကားလုံးပြတ်လပ်မှုက ပို့စ်ကို မကယ်တင်နိုင်ပါ။
13:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 58
ဤနေရာတွင် သော့သည် စကားလုံးအရေအတွက်အစား အကြောင်းအရာမဟုတ်လော။ သင့်တွင် အကြောင်းအရာကောင်းများ ရှိပါက လူများက သင့်ထံ လင့်ခ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် သင့်အား Google အခွင့်အာဏာ ပေးမည် သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးမှုများကို မှတ်ချက်များတွင် ဆက်လက်ရှင်သန်စေပြီး သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပုံမှန်မွမ်းမံနေကြောင်း Google ကို အထင်ကြီးစေမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ စကားလုံး 250 ထက်ပိုတဲ့ အကြောင်းအရာကောင်းတွေရဖို့ ပိုလွယ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ငါ တစ်ခုခု လွဲနေတာလား။
14:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 13
အရင်က ဘလော့ခ်လုပ်ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဒါက ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး အကြောင်းအရာက ဘုရင်လို့ ထင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းအကြောင်းကို ပထမအကြိမ် ဘလော့ဂ်ဂါ သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လာသော မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေရန် အရေးကြီးပါသည်။
13:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 04
"ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီမှာ သင်ရေးတဲ့ စကားလုံးအရေအတွက်က ပို့စ်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စကားလုံးအရေအတွက် ဖြစ်သင့်ပါတယ်"
ဒါက ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှ အသင့်တော်ဆုံး အကြံဉာဏ်ပါပဲ။
(သေချာပါတယ်၊ ရှည်လျားတဲ့ ပို့စ်တွေကို ရေးတဲ့သူဆိုတော့ ဘက်လိုက်မိပါတယ် 🙂)
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်များ၏ ပုံမှန်စာဖတ်သူများသည် ကျွန်ုပ်၏ရေးသားမှုပုံစံကို နှစ်သက်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် အချို့က စာလုံး 250 သည် အများဆုံးဖြစ်သင့်သည်ဟု ဆိုသောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းကိုပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ (၎င်းသည် SE ၏သော့ချက်စာလုံးများကို ကောင်းမွန်စွာရောနှောနိုင်စေသည်)။
သင့်ပို့စ်များသည် ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များနှင့် ပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်သောကြောင့် ဟုတ်ပါသည်၊ အကြံဉာဏ်ကောင်းများ- 'လက်ခံထားသောစံနှုန်း' ကို မလိုက်နာပါနှင့်။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေပြီး စကားလုံးများကို ရေတွက်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။
14:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 8, 08
မြစ်ဆုံမှာ ဆွေးနွေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီအချက်ကို ကျွန်တော် တကယ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် အတန်းတွေနဲ့ သင်လုပ်တယ်။ 🙂
@Cynthia က မင်း Vent၊ Rant နဲ့ Rave ပြောတာကို ချစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင် အဖတ်အများဆုံး ပို့စ်များမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို အော်ဟစ်ပြီး အရူးအမူး ဖြစ်နေချိန်ဖြစ်သည်။ 🙂
14:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 16
ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းမှာ သတင်းမှားတွေ အများကြီးရှိပြီး ဘယ်သူမှ မှော်ကျည်ဆန်ကို တကယ်မရရှိပါဘူး။ Google သည် ကျွန်ုပ်အား တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆိုးရွားသော ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို ပေးဆောင်ဆဲဖြစ်ပြီး အခြားအချိန်များတွင် ကောင်းမွန်စွာရေးသားထားသော ပို့စ်တစ်ခုကို ရရှိရန် အနံ့အသက်ဆိုးများ ရှိနေပါသည်။
မိတ္တူကူးဖို့ ဒေတာတချို့နဲ့ 'ထင်မြင်ယူဆချက်' တွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာနေဆဲပါ။
မတ်လ 5, 2009 မှာ 3: 39 AM
ကောင်းသော SEO အကြံပြုချက်
14:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 38 တွင်
19:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 59
19:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 59
19:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 47
စည်းကမ်းလွန်ကဲသော အမြင်ကို ဒေတာကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် မတူပါ။ ဆောင်းပါး (ဘလော့ဂ် သို့မဟုတ် အခြားနည်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်မှာ “စာရေးကောင်းခြင်း” ဖြစ်သည်။ အရေးအသား (သဒ္ဒါ၊ အကြောင်းအရာ၊ ဇာတ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်) ပိုကောင်းလေ ပိုကြာလေ ပိုဖတ်လေပါပဲ။
ဒီဇင်ဘာ 2, 2011 မှာ 1: 41 AM
ဒါကို ရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့် ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်အများစုသည် ပို့စ်တစ်ခုလျှင် စကားလုံး ၃၅၀ မှ ၄၅၀ အထိဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်ကိုသွားတဲ့အခါ ပို့စ်က စာလုံးရေ ၅၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်၊ ဘလော့ဂ်ရှည်ကြီးကို လူအများစုက ဖတ်ရတာ ကြိုက်မယ်မထင်ပါဘူး။ စာလုံး 350 ထက်နည်းတဲ့အချက်ကို ရအောင်ကြိုးစားတယ်။ ငါမှားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် အတွေးသက်သက်ပါ။ ဆယ်လီ
4:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 47 တွင်
လူတွေက စာဖတ်နည်းတယ် ဆိုတာ သေချာပေါက် သဘောတူပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ကျည်ဆန်အမှတ်များ၊ ကောင်းမွန်သောရုပ်ပုံများနှင့် 'skimmers' ကိုဖမ်းယူရန် ၎င်းတို့တတ်နိုင်သမျှနေရာတိုင်းတွင် ရဲရင့်ခြင်း/အလေးပေးမှုများကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား တွန်းအားပေးပါသည်။ သင်က တသမတ်တည်းဖြစ်နေရင် အဲဒါက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ငါထင်တယ်… ဒါကြောင့် လူတွေက လည်ပတ်မှုတိုင်းနဲ့ တူညီတဲ့အရာကို မျှော်လင့်လာနိုင်တယ်။
15:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 25 တွင်
လွန်ခဲ့သည့်လက Allison Carter နှင့် Jeremy Zucker ဦးဆောင်သော သူငယ်ချင်းများစွာနှင့် စကားစမြည်ပြောရာတွင် ပို့စ်တစ်ခုအတွက် မှန်ကန်သော စကားလုံးအရေအတွက်မှာ "ပို့စ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သော စကားလုံးအရေအတွက်" ဟု နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။
မေလ 7, 2012 မှာ 3: 13 pm တွင်
ကျွန်တော် မှော်နံပါတ်တစ်ခုကို ရှာလိုက်ပြီး အဖြေမှန်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Matt
ဇွန်လ2ရက် 2012 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 59 မိနစ်
ပို့စ်တစ်ခုလျှင် သင်ရေးသော စကားလုံးအရေအတွက်သည် ပို့စ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သော စကားလုံးအရေအတွက် ဖြစ်သင့်သည်။ Word။
မေလ 1, 2013 မှာ 2: 46 pm တွင်
ဒါက အများကြီး အထောက်အကူ ရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စကားလုံး 600 ကိုမထိရင် အခုငါမထိတ်လန့်ဘူး။ ရုပ်ပုံတွေအပေါ် ဘယ်လိုထင်လဲ။
မေလ 1, 2013 မှာ 3: 35 pm တွင်
ပုံတွေက အရေးကြီးတယ်။ ခက်ခဲသောအကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြရန်သာမက သင့်အကြောင်းအရာကို စာဖတ်သူများအား ဆွဲဆောင်ကာ ၎င်းတို့ကို မှတ်မိစေရန်လည်း ကူညီပေးပါသည်။ —
ဇွန်လ9ရက် 2013 ခုနှစ် နံနက် 8 နာရီ 58 မိနစ်
ကောင်းသောအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ။ စကားလုံးပေါင်း 700 ကျော်လောက်က စာဖတ်သူကို ဆုံးရှုံးစေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ စာတမ်းပြုစုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မတ်လ 13, 2014 မှာ 4: 48 AM
မင်္ဂလာပါ ပို့စ်ကောင်း၊ ကျေးဇူးပါ။
ဒါက အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲသွားပြီလား? လက်ရှိဒေတာကို ပိုမိုကြည့်ရှုရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။
မတ်လ 13, 2014 မှာ 12: 01 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ရေးသားမှုမှာ များစွာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်လည်း @mikemorrison1:disqus ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ယခုအခါ များစွာသော မီဒီယာအမျိုးအစားများ၊ စာသားများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ (ကျည်ဆံပါသော စာသား၊ ခေါင်းစဉ်ခွဲများ စသည်) ဖြင့် 'ပိုထူသော' ပို့စ်များကို ပိုမိုတန်ဖိုးထားလာကြသည်။
မေလ 16, 2014 မှာ 2: 17 pm တွင်
ပို့စ်တစ်ခုလျှင် စကားလုံးမည်မျှမှန်သည်ဖြစ်စေ ခက်ခဲမြန်ဆန်သော စည်းမျဉ်းများမရှိပါ။ အဲဒါက ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး ပို့စ်ဘယ်လောက်အသေးစိတ် ဖော်ပြဖို့ လိုမလဲ။ ပို့စ်တွင် အချို့သောပို့စ်များသည် အသေး၊ အလတ်နှင့် အမြီးရှည်များကဲ့သို့ အမျိုးအစားကွဲပြားနိုင်သည်။ တူညီသောစံနှုန်းများကို ဤပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ ပို့စ်တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှစကားလုံး 832.3 နှင့် ချုပ်ရိုးများရှိပြီး ပို့စ်တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှစကားလုံး 512.5 ရှိသည်။ ထိပ်တန်း ဘလော့ဂ်တွင် ပို့စ်တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှ 742.5 စကားလုံးများ ပါရှိပြီး ပို့စ်တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 744 လုံးရှိသည်။
12:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 57
12:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 17
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို နှစ်အတော်ကြာအောင် ပြန်မလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း အချိန်ကြာနိုင်သည်။ Google သည် ယခင်ကထက် တစ်မျက်နှာလျှင် စကားလုံးပိုများသော "ပိုထူသော" စာမျက်နှာများကို ပိုမိုကြည့်ရှုနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ လမ်းညွှန်စာအုပ်များသည် ပြီးခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သိသိသာသာ အဆင့်အတက်အကျရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းဆုံး စကားလုံး 250 ရှိရန် ကြိုးစားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ကြိုးစားနေသော ပို့စ်များနှင့်အတူ စကားလုံး 500 မှ 1000 ထိအောင် တကယ်ကြိုးစားပါသည်။